Lahatsary DCS vaovao mampiseho F / A-18 Autopilot mivondrona
Fampidinana: 7,072 alaina 966,707 fotoana.
DCS mampiseho ny maody Coupled Autopilot ho an'ny F / A-18C Hornet (ho avy amin'ny fanavaozana manaraka).
Tonga amin'ny fanavaozana lehibe manaraka ho an'ny Hornet, ny maody Coupled Autopilot dia mamela ny fiaramanidina hisidina ho any amin'ny toerana napetraka. Izy io dia mety ho toerana fiantsonan-dàlana, gara TACAN, na toerana kendrena (TGT) rehefa amin'ny fomba fanaterana AUTO. Rehefa ampiarahina amin'ny asan'ny waypoint AUTO ao amin'ny HSI, dia mamela ny fivezivezena an-tanana koa rehefa manidina amina andiam-pandehanana maromaro. Rehefa ao amin'ny Mode Coupled, ny tsipika fizarana hahatratrarana ilay toerana napetraka dia azo ahitsy ihany koa.
Navoaka: 30 Martsa 2021